/g,'>').replace(/"/g,'"'), data = data_escaped.replace(/([\_u1031\_u103A]*)([\_u1000-\_u1021])/g,"$1\_u200b$2").replace(/\_u1031/g,"\_u200b\_u1031"); if (data != data_escaped) $(this).replaceWith(data); }); }); လင္းဦး(စိတ္ပညာ) _ Lin Oo: မွန်ဘို်င်းဟုိတယ်မှ ဓါးစာခံအချို့လွတ်ေြမာက်
မွန်ဘို်င်းဟိုတယ်မှ နို့စို့ကေလးငယ်အပါအ၀င် အနည်းဆံုး ဧည့်သည်(၂၅)ေရာက်ကို အေစာင့် အေရှာက်များ ြခံရံလျက် အသင့်ေစာင့်ေနေသာ ကားများထဲသို့ (၂၈-၁၁-၂၀၀၈) (ေသာြကာေန့)တွင် ပို့ေပး လိုက်ပါသည် ။ ဧည့်သည်အများစုမှာ နိုင်ငံြခားသားများ ြဖစ်ပါသည် ။
အေစာပိုင်းက အီတလီနိုင်ငံြခားေရး၀န်ြကီးရံုးမှ ေြပာြကားရာတွင် Trident ဟိုတယ်တွင် ဓားစာခံ အြဖစ် ဖမ်းဆီးထားသည့် လမ်းေလှျာက်ကာစ ကေလးငယ်နှင့် မိခင်အပါအ၀င် အီတလီလူမျိုး(၇)ေယာက် လွတ်ေြမာက်လာသည်ဟု ဆိုပါသည် ။ ဟုိတယ်တွင် ဓားစာခံများ မည်မှျကျန်သည်ကို ရှင်းလင်းစွာ မသိရေသးဟု ဆိုပါသည် ။
လွန်ခဲ့ေသာေန့က အြကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ြခင်းခံရေသာ ဟိုတယ်(၂)ခုအနက် (၁)ခုြဖစ်သည့် Oberoi ဟုိတယ်မှ ဧည့်သည်များကို အေစာင့်များြခံရံလျက် ထုတ်ယူသည်ဟု ဆိုပါသည် ။ သို့ရာတွင် ေသနတ်သမားများ ထိန်းသိမ်းထားသည့် ဧည့်သည်အေရအတွက်ကို မသိရဟု ဆိုပါသည်။ (၂၆-၁၁-၂၀၀၈) ဗုဒ္ဓဟူးေန့တွင် တိုက်ခိုက်ခံရေသာ ဂျူးလူမျိုးများ၏ ဗဟိုဌာနနှင့် ဇိမ်ခံဟိုတယ်(၂)ခုကို လံုြခံုေရးတပ်ဖွဲ့များက ရှင်းလင်းလျက်ရိှပါသည် ။
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ စီးပွားေရး အချက်အြခာ မွန်ဘိုင်းြမို့၏ ေနရာ(၇)ေနရာ၌ (၂၆-၁၁-၂၀၀၈) ဗုဒ္ဓဟူးေန့ ည ေနှာင်းပိုင်းတွင် စတင်ခဲ့ေသာ အြကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုေြကာင့် အနည်းဆံုး လူ(၂၅၀)ေသဆံုးြပီး၊လူ(၃၀၀)ေကျာ် ဒဏ်ရာရရိှခဲ့ပါသည်။
အိန္ဒိယတွင် CNN၏ ဌာနခွဲတစ်ခုြဖစ်သည့် CNN- IBN အား အိန္ဒိယအမျိုးသားလံုြခံုေရးတပ်ဖွဲ့၏ ညွှန်ြကားေရးမှူးချုပ် J.K.Dutt က ေြပာြကားရာ၌ (၂၈-၁၁-၂၀၀၈) (ေသာြကာေန့)ေန့လည် (၁)နာရီတွင် Oberoi ဟိုတယ်၌ ေသနတ်သမားတစ်ေယာက်ကို ပစ်သတ်လိုက်သည်ဟု ဆိုပါသည်။ သို့ရာတွင် မည်မှျ ကျန်ရိှသည်ကို မသိရဟု ၎င်းက ဆိုပါသည်။
(၂၈-၁၁-၂၀၀၈) (ေသာြကာေန့) အေစာပိုင်းက Taj ဟိုတယ်စစ်ဆင်ေရးကို ဦးစီးေနသည့် ဗိုလ်ချုပ် တစ်ဦးက ေြပာြကားရာ၌ ဟိုတယ်အတွင်း၌ ဓားစာခံ (၁၅)ေယာက်မှ (၂၀)ေယာက် ကျန်ရိှေြကာင်း၊ ၎င်းတို့မှာ အန္တရာယ်ကင်းစွာရှိေြကာင်း၊ ေသနတ်သမား(၂)ဦး သို့မဟုတ် (၃)ဦးအနက် (၁)ဦးမှာ ဒဏ်ရာ ရရိှထားေြကာင်းြဖင့် ဆိုပါသည်။
Taj Mahal ဟိုတယ်တွင် ပိတ်မိေနသည့် အစ်မနှင့်တူမြဖစ်သူအား ဟိုတယ်အြပင်ဘက်တွင် ေစာင့်ေနေသာ ညီမက ေြပာြကားရာ၌ သူမသည် (၂၇-၁၁-၂၀၀၈) (ြကာသာပေတးေန့) နံနက်(၃)နာရီ ကတည်းက ေရာက်ေနေြကာင်း၊ ယခုနာရီ (၃၀)နီးပါးရိှသည့််တိုင် မည်သည့်သတင်းနှင့် မည်သို့ ကယ်တင်ေနသည်ကို မသိရေြကာင်းြဖင့် ေြပာြကားပါသည်။ ေပါက်ကွဲမှုများနှင့် ေသနတ်သံများကို Taj Mahal နှင့် Oberoi တွင် ြပတ်ေတာင်း ြပတ်ေတာင်း (၂၇-၁၁-၂၀၀၈)(ြကာသာပေတးေန့)တစ်ေလှျာက်လံုး ြကားေနရေြကာင်း၊ သို့ရာတွင် ေပါက်ကွဲမှုများ၏ အေြကာင်းရင်းကို မသိရေြကာင်း ဆိုပါသည်။
ဂျူးလူမျိုးဗဟုိဌာနအနီးရိှ Chabad house တွင် ေသနတ်သမား(၂)ဦးမှ (၃)ဦးရိှေနသည်ဟု ယံုြကည် ရေြကာင်းဆုိပါသည်။ အိန္ဒိယအမျိုးသားလံုြခံုေရးတပ်ဖွဲ့၏ ညွှန်ြကားေရးမှူးချုပ် J.K.Dutt က CNN. IBN ကို ေြပာြကားရာ၌ ဓားစားခံများ အားလံုးကို လွှတ်လိုက်ြပီြဖစ်ေြကာင်း ဆိုပါသည်။
Chabad house အနီးသို့ ချဉ်းကပ်လာသူများအား အထဲမှ ေသနတ်နှင့် လက်ပစ်ဗံုးများြဖင့် ပစ်ခတ်ပါသည်။ (၄)နာရီအတွင်း ဗံုး(၃)ခါ ေပါက်ကွဲခဲ့ပါသည်။ နံနက်မလင်းခင် ရဲဂျစ်ကားများ၊ မီးသတ်ကားများနှင့် လူနာတင်ကား(၁)စီးတို့ ေရာက်ရိှ ခဲ့ြပီး၊ အရုဏ်တက်အချိန်တွင် ရဟတ်ယာဉ်(၃)စီးေရာက်လာ၍ စစ်သား(၂)ဒါဇင်ခန့်သည် အမိုးေပါ်သို့ ဆင်းသက်ခဲ့ပါသည်။ ထို့ေနာက် (၅)ြကိမ် သို့မဟုတ် (၆)ြကိမ်ခန့် ြပင်းထန်စွာ ေပါက်ကွဲသံများနှင့် လက်နက်ငယ် ပစ်ခတ်သံများကို ြကားရပါသည်။ တပ်သားအချို့သည် အနီးဆံုးတိုက်များတွင် ေနရာယူလိုက် ြကပါသည်။
Chabad- Lubavitch International ၏ ေြပာေရးဆိုခွင့်ရိှသူ Rabbi Josh Runyan က ေြပာြကားရာ၌ Rabbi Gavriel Noach Holtzberg (၂၉)နှစ်နှင့် ၎င်း၏ဇနီး Rivka (၂၈)နှစ်တို့မှာ အိမ်ထဲတွင် ရိှဆဲဟု ယံုြကည်ရေြကာင်း ေြပာပါသည်။ ၎င်းတို့၏သားနှင့် မိသားစုတို့မှာ မွန်ဘိုင်းတွင် လံုြခံုစွာရိှသည်ဟု ဆိုပါသည်။
(၂၇-၁၁-၂၀၀၈) (ြကာသာပေတးေန့) အေစာပိုင်းခန့်က မဟာရာရှ်တာြပည်နယ် ၀န်ြကီးချုပ်က အဆိုပါ အေဆာင်အဦးမှ အမျိုးသမီး (၂)ဦးနှင့် ကေလးငယ်(၁)ဦးတို့ လွတ်ေြမာက်သွားသည်ဟု ဆိုပါသည်။ CNN-IBN သတင်းေထာက် Raksha Shetty က အိမ်ေဖာ်၊ ထမင်းချက်နှင့် ကေလးငယ်တစ်ဦး စုစုေပါင်း ဓားစာခံ(၃)ဦး လွတ်ေြမာက်သွားသည်ဟု ဆိုပါသည်။
အစ္စေရးသတင်းစာ Haaretz က သတင်းပို့ရာ၌ အဆိုပါဂျူးလူမျိုးတို့၏ ဗဟိုဌာန၏ ထမင်းချက် Sandra Samuel သည် အိမ်ရှင် Holtzberg ၏ (၂)နှစ်အရွယ်ရိှ သားငယ်ကိုဆွဲေခါ်၍ အြခားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနှင့် အတူထွက်ေြပးခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်။
ရဲဌာနချုပ်၏ ညွှန်ြကားေရးမှူးချုပ်က ေြပာြကားရာ၌ တိုက်ခိုက်မှုများဆက်တိုက်ြဖစ်ပွားမှုေြကာင့် လူ(၁၂၅)ဦး ေသဆံုးခဲ့ြပီး၊ ၎င်းတွင် အနည်းဆံုးနိုင်ငံြခားသား(၆)ဦး ပါ၀င်သည်ဟု ဆိုပါသည်။ ရဲများဘက်က (၁၄)ဦးေသဆံုးြပီး ဒဏ်ရာရသူ (၃၂၇)ဦးရိှသည်ဟု ဆိုပါသည်။
(၂၇-၁၁-၂၀၀၈)(ြကာသာပေတးေန့)က အိန္ဒိယ၀န်ြကီးချုပ် Manmohan Singh က ရုပ်ြမင်သံြကားမှ ေြပာြကားရာ၌ တိုက်ခိုက်သူများသည် နိုင်ငံြခားသားများြဖစ်ေြကာင်း၊ သို့ရာတွင် ၎င်းတို့သည် ဘယ်ကလာသည်ဟု ယံုြကည်ေြကာင်း ေြပာြကားြခင်း မရိှပါ။ တိုက်ခိုက်မှုသည် ြကိုတင်ြပင်ဆင်ြပီးမှ စနစ်တကျ တိုက်ခိုက်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ေြကာင်း၊ ြပည်ပနှင့် အဆက်အသွယ်ရိှနိုင်ေြကာင်း၊ အြပစ်မဲ့ နိုင်ငံြခားသား များကို ေရွး၍ အြဖစ်အပျက်ြကီးတစ်ရပ်အြဖစ် တုန်လှုပ်ေချာက်ြခားေအာင်လုပ်ေြကာင်းြဖင့် ၎င်းကဆိုပါသည်။
ြဗိတိသှျနိုင်ငံြခားေရး၀န်ြကီး David Milibad က (၂၇-၁၁-၂၀၀၈) (ြကာသာပေတးေန့)တွင် ေြပာြကားရာ၌ ြဗိတိသှျနို်င်ငံြခားေရးရံုး အရာရိှများနှင့် ြမို့ေတာ်ရဲများပါ၀င်ေသာအဖွဲ့သည် မွန်ဘိုင်းြမို့သို့ ေရာက်ရိှခဲ့ေြကာင်း၊ အေရးြကီးဆံုးလုပ်ရမည့်အလုပ်မှာ ဟိုတယ်များတွင် ပိတ်မိေနေသာသူများနှင့် ဆက်သွယ်ြပီး ြဗိတိသှျလူမျိုးများကို ေဖာ်ထုတ်သွားရန်ြဖစ်ေြကာင်းနှင့် အိန္ဒိယအာဏာပိုင်များကို ကျွမ်းကျင်မှု အကူအညီများေပးသွားရန်ြဖစ်ေြကာင်းြဖင့် ေြပာြကားပါသည်။
တိုက်ခိုက်သူများကုိ ေဖာ်ထုတ်မှုသည် သဲကွဲမှုမရိှေသးေြကာင်း၊ ေသနတ်သမား(၂၆)ဦးခန့် ရိှမည်ဟု ယံုြကည်ရေြကာင်းနှင့် အများစုမှာ လူငယ်များြဖစ်ေြကာင်းြဖင့် CNN-IBN က ရဲသတင်းများကို ကိုးကား၍ ေြပာြကားပါသည်။ Union Cabinet ၀န်ြကီး Kapil Sibal က အစိုးရသတင်းဌာနြဖစ်သည့် Press Trust of India ကို ေြပာြကားရာ၌ ေသနတ်သမားများသည် လေပါင်းများစွာ ြကိုတင်ြပင်ဆင်ထားြပီး ဇိမ်ခံဟိုတယ် (၂)ခုစလံုးတွင် ထိန်းချုပ်ေရးအခန်းများကိုပါ တည်ေထာင်ထားသည်ဟု ဆိုပါသည်။
ယခုအြကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုကို Deccan Mujahideen က ြပုလုပ်သည်ဟု အိန္ဒိယသတင်းဌာန များသို့ e-mail ြဖင့် အေြကာင်းြကားပါသည်။ Deccanမှာ နိုင်ငံ၏ေတာင်ဖက်ပိုင်းရိှ Deccan ကုန်းြမင့်ေဒသကို ရည်ညွှန်းြပီး၊ Mujahideen သည် Jihad ဘာသာေရးစစ်ပွဲအတွက် တိုက်ပွဲ၀င်သူများဟု အဓိပ္ပါယ်ရပါသည်။
Taj Mahal ဟိုတယ်ကို လက်နက်ကိုင်များက ေရလမ်းမှ ေလှြဖင့်၀င်ေရာက်လာြခင်းြဖစ်သည်ဟု ရဲများက ဆိုပါသည်။ ဟိုတယ်အား အြကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုနှင့် ဆက်နွယ်ေနသည့် မသကင်္ာသူ (၉)ဦးကို ဖမ်းဆီးခဲ့ေြကာင်း၊ (၇)ဦးမှာ တံငါသည်များြဖစ်ြပီး Taj Mahal ဟိုတယ်အနီးရိှ ေလှထဲတွင် လက်ပစ်ဗံုးများကို ရှာေဖွေတွ့ရိှရေြကာင်းြဖင့် ရဲများက ဆိုပါသည်။ လက်နက်ကိုင်များသည် ရဲကားတစ်စီးအပါအ၀င် ကားများကို အပိုင်စီးြပီး အနည်းဆံုးအုပ်စု(၃)စုခွဲ၍ တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်။
အုပ်စု(၁)စုမှာ အေနာက်နိုင်ငံ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များ လာေလ့ရိှေသာ နာမည်ြကီး Cafe Leopold သို့ ဦးတည်ြပီး လမ်းေပါ်ရိှလူများကို လက်လွတ်စပယ် ပစ်ခတ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့ြပင် ဘူတာရံုြဖစ်သည့် Chhatrapati Shivaji Terminus ကို လက်ပစ်ဗံုးနှင့် လက်နက်များြဖင့် ပစ်ခတ်ခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်။ တိုက်ခိုက်ြခင်းခံရေသာ ေနရာများသို့ ရဲများသွားစဉ်၊ Cama ေဆးရံုကိုလည်း လက်နက်ကိုင်များက တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်။ ကျန်အုပ်စု(၂)စုသည် ဟိုတယ် Oberoi နှင့် Taj Mahal သို့ တိုက်ခိုက်ခဲ့ သည်ဟု ဆိုပါသည်။
တိုက်ခိုက်မှုများြဖစ်ပွားြပီးေနာက် နိုင်ငံ၏အေနာက်ပို်င်းကမ်းရိုးတန်းတစ်ေလှျာက် အိန္ဒိယေရတပ်မှ ကင်းလှည့်၍ MV Alpha အမည်ရိှ သေဘင်္ာမှ သေဘင်္ာသားများကို စစ်ေဆးလျက်ရိှသည်ဟု ဆိုပါသည်။ အဆိုပါသေဘင်္ာကို အိန္ဒိယကမ်းေြခေစာင့်တပ်ဖွဲ့က ထိန်းသိမ်းခဲ့သည်ဟု ြဗိတိသှျအာဏာပိုင်များက ဆိုပါသည်။ အဆိုပါသေဘင်္ာမှာ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ၊ ကာရာချီြမို့မှြဖစ်သည်ဟု ယံုြကည်ေြကာင်းနှင့် အဆိုပါ သေဘင်္ာမှ ယခုကဲ့သို့ အြကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုကို စတင်ခဲ့သည်ဟု ယံုြကည်ေြကာင်း အာဏာပိုင်များက ဆိုပါသည်။
ြဗိတိသှျအာဏာပိုင်များက ေြပာြကားရာ၌ MV Alpha သေဘင်္ာမှေန၍ ေမာ်ေတာ်ဘုတ်(၃)စီးြဖင့် လက်နက်များနှင့် စစ်ေသွးြကွများကို သယ်ေဆာင်၍ အိန္ဒိယကမ်းရိုးတန်းအတိုင်း မွန်ဘို်င်းြမို့သို့ ထွက်ခွာြပီး တိုက်ခိုက်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။
သို့ရာတွင် ပါကစ္စတန်နို်င်ငံ၊ ကာရာချီြမို့ ရဲအရာရိှချုပ် Waseem Ahmad က တိုက်ခိုက်သူများ အေနြဖင့် မိမိတို့ြမို့မှ ထွက်ခွာသွားသည်ဟု သက်ေသအေထာက်အထားတစ်စံုတစ်ရာ မေတွ့ရေြကာင်းြဖင့် ေြပာြကားပါသည်။ အေစာပိုင်းက အရာရိှများက ေြပာြကားရာတွင် အာေရဗျပင်လယ်တွင် အိန္ဒိယ ကမ်းေြခေစာင့်တပ်ဖွဲ့နှင့် ေရတပ်က ေမာ်ေတာ်ဘုတ် တစ်စင်းကို ရှာေဖွေနခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်။
နိုင်ငံတကာ မှုခင်းရဲအဖွဲ့ြကီး (Interpol) ၏ အေထွေထွအတွင်းေရးမှူးချုပ် Ronald K.Noble က ေြပာြကားရာ၌ ဤကဲ့သို့ အြကမ်းဖက်သူများအေနြဖင့် ပူးေပါင်းညိှနိှုင်း၍ စီမံကိန်းြဖင့် အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ ပစ်မှတ်များကို တိုက်ခိုက်လာလှျင်ြဖစ်ေစ၊ နိုင်ငံအစိုးရ၏ အြကီးအကဲက ယခုလို အြကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုြကီး သည် ြပည်ပနှင့် ဆက်နွယ်မှုရိှေြကာင်း ထုတ်ေဖာ်ေြပာြကားလာလှျင်ြဖစ်ေစ၊ နို်င်ငံအတွင်းရိှ ရဲဌာနအေနြဖင့် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာအကူအညီကို လိုအပ်သည်ဟု ေြပာြကားခဲ့ပါသည်။
ယခုနှစ်ပိုင်းများအတွင်း အိနိ္ဒယနို်င်ငံအေနြဖင့် အြကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများ ြဖစ်ပွားခဲ့ပါသည်။ ၎င်းတွင် ၂၀၀၆ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင် ရံုးတက်ချိန်၌ မွန်ဘို်င်းြမို့ရိှ အလုပ်သွားအလုပ်ြပန်သူများ စီးနင်းသည့် ရထားများနှင့် လူသွားစြကင်္န်များတွင် ဗံုးများကို ေဖာက်ခွဲခဲ့ြကပါသည်။ ထိုသို့ေဖာက်ခွဲခဲ့သြဖင့် လူ(၂၀၉)ဦး ေသဆံုးခဲ့ရပါသည်။ ယင်းလတွင် အိန္ဒိယအေနာက်ပိုင်း Ahmedabad ြမို့တွင် ဗံုးများအစဉ်လိုက် ေဖာက်ခွဲခဲ့ သြဖင့် လူ(၄၉)ဦး ေသဆံုးခဲ့ြပီး (၁၀၀)ေကျာ် ဒဏ်ရာရရိှခဲ့သည်ဟု ရဲများက ဆိုပါသည်။
Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on at Friday, November 28, 2008
တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ ေမတ္တာရပ်ခံပါရေစအကိုေရ**ကျေနာ် ကိုတက်ဂ်တာ
၀မ်းသာပါတယ်အကိုေရ**ခင်လို့ ေရးခိုင်းတယ်ဆိုတာလည်း ကျေနာ်
နားလည်ပါတယ်အကို**ဒါေပမယ့် ကျေနာ်မေရးပါရေစနဲ့လို့ ေမတ္တာရပ်ခံပါ
November 29, 2008 at 3:01:00 AM GMT+6:30
ဒီသတင်းေတွက စီအဲန်အဲန်မှာပဲ ဖတ်ဖတ်၊ နယူးေယာက်ခ်တိုင်းမ်မှာပဲ ဖတ်ဖတ် ြမန်မာဘာသာ စစ်စစ်နဲ့ ဖတ်ရတာေလာက်ေတာ့ လှျာရင်း မြမက်တာ အမှန်ပဲဗျ. ။ ထင်တဲ့ အတိုင်းပဲ ကိုလင်းဦးြကီးေရးထားလိမ့်မယ် ဆိုြပီး အေြပးအလွား လာြကည့်တာ လာရြကိုးနပ်ပါတယ်ဗျာ။ သတင်းေတွအားလံုး အတွက် ေကျးဇူးပါဗျို့။ ေနာက်ထပ်လဲ ဆက်ြပီး အခုလို ထူးြခားသတင်းေတွ၊ မှတ်မှတ်သားသား သတင်းေတွကို ဆက်ေရးနိုင်ပါေစဗျာ။ အြမဲအားေပးေနတယ်ဗျို့။
(အမှန်ေြပာရရင် အခုလို သတင်းဆိုဒ် ဆန်ဆန် ၊ တစ်ကယ့် သတင်းသမား တစ်ေယာက်လို ကမာ္ဘ့သတင်း ေတွကို ေသေသသပ်သပ် ေရးေနတဲ့ ဘေလာ့ဂ် ရယ်လို့ ြမန်မာ ဘေလာ့ဂ်ေတွထဲ ကိုလင်းဦးပဲ ရှိေသးတယ်လို့ ယူဆမိသဗျ။ . )
November 30, 2008 at 4:32:00 AM GMT+6:30